सुनको भाउ लगातार बढोत्तरीमा ब्रेक, २ सातापछि पहिलोपटक गिरावट
काठमाण्डौ। पछिल्लो दुई सातायता लगातार उकालो लागेको सुनको यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार पहिलोपटक ओरालो लागेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी रहेको छ। त्यसबीच सुनचाँदी व्यवसाय पनि चैत ११ गतेदेखि बन्द रहेकोमा गत जेठ २५ गतेबाट खुलेको थियो। त्यसयता लगातार बढिरहेको सुनको भाउ मंगलबार...
सुनको भाउमा उछाल, तोलाकै रु. ९१ हजार
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ अब तोलाकै ९१ हजार रुपैयाँ पर्ने भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ४०० रुपैयाँ बढ्दै छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रतितोला ९० हजार ५६५ पुगेको छ। तेजाबी सुनमा पनि आज तोलामा ४०५ रुपैयाँ बढेको छ। यो भाउ नेपाली सुन बजारको इतिहासमा...
सुनको भाउ रु. ९० हजार पार, ऐतिहासिक उछाल
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ९० हजार रुपैयाँ नाघेको छ। यो नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक सुनको भाउ तोलाको ९० हजार रुपैयाँ नाघेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको पहिलो दिन सुन तोलामा ७०० रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला छापावाल सुन ९० हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९० हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो...
तोलाकै रु. ९० हजार पुग्नै लाग्यो सुनको भाउ
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ९० हजार रुपैयाँ आसपास पुगेको छ। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा १०० रुपैयाँ बढ्दै सुनको भाउ लगभग ९० हजार रुपैयाँ आसपास पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तोलामा १०० रुपैयाँ बढ्दै शुक्रबार प्रतितोला छापावाल सुन ८९ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको छ भने तेजाबी सुन ८९ हजार...
सर्वाधिक उचाइमा सुनको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार तोलामा १०० बढ्दै सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तुलनामा तोलामा १०० रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला छापावाल सुन ८९ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८९ हजार ३६५ रुपैयाँ कायम...
सुनको भाउमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले सोमबार नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँ बढ्दै नयाँ उचाइमा पुगेको छ। यो बढोत्तरीसँगै सोमबार प्रतितोला छापावाल सुन ८९ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८९ हजार २६५ रुपैयाँ पुगेको छ। यो भाउ नेपालकै इतिहासमा...
आज सुन तोलाको कति ?
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार पनि सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार पनि प्रतितोला छापावाल सुन ८९ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८९ हजार १६५ रुपैयाँ कायम रहेको हो। यो भाउ नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। गत साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि सुनको भाउ स्थिर...
सुनको भाउ बढोत्तरीमा ब्रेक, आज स्थिर
काठमाण्डौ। लगातार बढिरहेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार स्थिर बनेको छ। लकडाउनबीच ७५ दिनपछि यो साता (गते जेठ २५ गतेबाट) सुनचाँदीको कोरोबार खुलेको थियो। कारोबार खुलेयता लगातार पाँच दिनसम्म सुनको मूल्यमा बढोत्तरी आएको थियो। तर कारोबारको अन्तिम दिन सुनको मूल्य स्थिर रहेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ९० हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा एकैदिन १ हजार रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ८९ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८९ हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो भाउ नेपालकै इतिहाससम्म हालसम्मकै उच्च पनि हो। हिजो बुधबार सुनको...
सुनको भाउमा लगातार उछाल, आज पनि ह्वात्तै बढ्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बुधबार फेरि ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको भाउ तोलामै ९०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ८८ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८८ हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो भाउ नेपालकै इतिहासमा उच्च पनि हो। हिजो पनि सुनको तोलामा २०० रुपैयाँ बढ्दै...
ऐतिहासिक उचाइमा सुनको भाउ
काठमाण्डौ । जारी लकडाउनमा बन्द रहेको कारोबार ७५ दिनपछि खुलेपछि सुनको भाउले नेपाली बजारमा लगातार ऐतिहासिक उचाइ कायम गरिरहेको छ। आज मंगलबार सुनको भाउ फेरि तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ मंगलबार प्रतितोला छापावाल ८७ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी ८७ हजार २६५ रुपैयाँ...
सुनको भाउ आज पनि बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो?
काठमाण्डौ। सुनको भाउ आज सोमबार पनि बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला छापावाल सुन ८७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८७ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनबीच हिजो...
सुनको भाउमा एकैपटक रु. १०४०० को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू लगेको लकडाउनसँगै बन्द रहेको सुनचाँदीको कारोबार ७५ दिनपछि आज आइतबारदेखि खुलेको छ। लामो लकडाउनपछि कारोबार खुलेकै दिन आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला १० हजार ४०० रुपैयाँले बढेको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा २०५ रुपैयाँको बढोत्तरी आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार...
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसको सन्त्रासका बीच नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढ्ने क्रम सोमबार पनि जारी रहेको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किन र २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिइसकेको छ। अहिले राजधानीमा मानिसको चहलपहल पनि घटेको छ। तर मानिसको चहलपहल घटे पनि सुनको मूल्यमा भने...
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा एकैदिन १ हजार रुपैयाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७६ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ५००...